Jawaab-celinta COVID-19 - Dugsiyada Dadweynaha ee Deegaanka Hargab-biyoodka ISD 834
Qorshaha Barashada Nabdoon ee sanad dugsiyeedka 2021-2022
Waxaan rajeyneynaa ardayda iyo shaqaalaha inay ku soo noqdaan sanad kale oo weyn oo waxbarasho ah! Waxaan rajeyneynaa howl caadi ah oo caadi ah sanadkan. Waxaan sii wadi doonnaa inaan raacno dhammaan tilmaamaha la xiriira COVID-19 iyo talooyinka Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC), Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE) iyo Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) si loo abuuro goobo ammaan ah oo caafimaad leh oo loogu talagalay carruurta xilligan dayrta .
Cusboonaysiinta 7/9/2021 Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) waxay soo saareen hagitaan casri ah oo loogu talagalay Ka-hortagga COVID-19 ee Dugsiyada K-12 . MDE iyo MDH ayaa dib u eegis ku sameynaya macluumaadka waxayna sameyn doonaan cusbooneysiin ku saabsan hagitaankooda dugsiyada Minnesota deyrta. La soco faahfaahin dheeraad ah inta la heli karo.
Waa kuwan soo koobid waxa aan ognahay xilligan:
Maaskarada ayaa si xoog leh loogu talinayaa shaqsiyaadka aan la tallaalin
Maaskarada ayaa loo baahan yahay dhammaan shakhsiyaadka saaran basaska iskuulka
Iskuulada mar dambe looma baahna inay karantiraan ardayda laga yaabo inay ku dhaceen COVID-19
Qoysasku waa inay u soo sheegaan dugsiga dhammaan kiisaska la xaqiijiyay ee COVID-19
Degmadu waxaa laga rabaa inay u soo gudbiso MDH dhammaan kiisaska la xaqiijiyay ee COVID-19
Qoysaska waxaa lagu wargelin doonaa kiisaska wanaagsan ee ka dhex jira fasalka / barnaamijka iyo / ama bulshada dugsiga
Soo-booqdayaasha iyo mutadawiciinta ayaa loo oggolaan doonaa dugsiyadeenna deyrta
Tilmaamaha Guud ee Caafimaadka & Amniga
Macluumaadka waxaa lagu beddeli karaa hagitaan kasta oo ka yimaada CDC, MDE iyo MDH.
Daboolida wajiga iyo fogeynta jirka
Dhaqanka nadaafadda gacanta
Kiisaska wanaagsan ee COVID-19
Tijaabinta & Talaalada
Maaskarada ayaa si xoog leh loogu talinayaa shaqsiyaadka aan la tallaalin . Ardayda iyo shaqaalaha looma baahna inay xirtaan waji-shareer ilaa iyo inta laga beddelayo shuruudaha gobolka ama federaalka. Haddii qof uun doonayo inuu xirto weji daboolan, waa lagu soo dhaweynayaa inuu sidaas sameeyo.
Degmadu waxay dayactiri doontaa saad kooban oo ah wejiga daboosha ardayda ama shaqaalaha doorta inay xirtaan.
CDC waxay ku talineysaa iskuulada inay ilaaliyaan ugu yaraan 3 fuudh oo masaafada jireed ah oo udhaxeysa ardayda fasalada gudaheeda, markasta oo ay suurta gal tahay.
Dhammaan ardayda iyo shaqaalaha waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay gacmahooda dhaqdaan xilliyada caadiga ah. Nadaafadda gacmaha oo wanaagsan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Gacmaha badanaa ku dhaq saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbidhiqsi, gaar ahaan ka dib markaad joogto meel fagaare ah ama ka dib markaad sanka ka dhufato, qufacdo, ama hindhisooto. Haddii saabuun iyo biyo aan la helin, isticmaal gacmo nadiifiye oo ay ku jiraan ugu yaraan 60% aalkolo.
Had iyo jeer ku dabool afkooda iyo sankooda maro markey qufacayaan ama hindhisayaan. Ku tuur unugyada la isticmaalay qashinka. Kuwa aan unug haysan waa inay ku qufacaan ama ku hindhisaan gacantooda ama xusulka.
Gacmaha dhaq marka aad timaaddo, ka hor iyo ka dib cunista cuntada, ka hor iyo ka dib marka aad marinayso qorrax-qorraxda, marka aad soo gelayso ama ka baxayso meelaha gudaha ah, iyo marka aad la xiriirto ama aad isticmaasho waxyaabaha la wadaago.
Kheyraadka: MDH: Nadaafadda Gacanta
Waaxda Caafimaadka ee Minnesota COVID-19 Go'aanka Tree waxay u adeegi doontaa hage si ay uga caawiso go'aaminta borotokoolka iyo tallaabooyinka xiga ee la xiriira kormeerka, karantiilinta iyo ogeysiinta.
Qoysasku waa inay ku wargeliyaan iskuduwaha barnaamijka, tababaraha ama macallinka haddii ilmahoodu imtixaan ka qaaday.
Kaqeybgalayaasha barnaamijka / fasalka iyo qoysaskooda waxaa lagu wargalin doonaa kiis wanaagsan oo leh warqad ogeysiin guud ah marka dacwad la soo gudbiyo.
Dadka tijaabada wanaagsan ka qaata COVID-19 waa inay joogaan guriga ilaa ay seddexdan waxyaalood ka run noqdaan:
Waxay dareemayaan fiicnaan. Qufacooda, neefta oo ku qabata, ama astaamo kale ayaa ka fiican; IYO ,
Waxay ahayd 10 maalmood tan iyo markii ugu horreysay ee ay xanuun dareemaan ama laga hubiyo inay qabaan; IYO ,
Qandho ma qabin ugu yaraan 24 saacadood, iyaga oo aan isticmaalin dawo xumadda yareyneysa.
Is-baaritaanka astaamaha COVID aad ayaa loo dhiirigeliyaa. Tilmaamaha MDH, ardayda ama shaqaalaha la kulma mid ka mid ah astaamaha soo socda waa inay guriga joogaan. Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa in shakhsiyaadkan laga baaro COVID.
Calaamadaha ugu badan ee la arki karaa waa 1 ama in ka badan oo ka mid ah kuwan :
Qandho dhan 100.4 darajo Fahrenheit ama ka sare
Qufac cusub ama qufac ka sii daraya
Dhibaato / waqti adag oo neefsasho ah
Dhimasho cusub ama dhadhan la'aan.
Calaamadaha aan caadiga ahayn waa laba ama in ka badan oo ka mid ah :
Lalabbo, matag ama shuban
Daal aad u daran / dareemid daal badan
Madax xanuun daran / aad u xun
Ciriiri sanka oo cusub / sanka oo xirma ama duuf leh.
Waxyaabaha ay tahay in la ogaado:
Haddii shaqsi leeyahay hal ama in ka badan astaamahan, waa inuu gurigiisa joogo oo waa inuu ka fogaadaa dadka kale, oo ay ku jiraan xubnaha qoysku, sida ugu macquulsan.
Ogeysii dugsiga / daryeelka ilmaha / barnaamijka dhalinyarada calaamadaha iyo tixgeli inaad wacdo dhakhtarka ilmaha ama bixiye daryeel caafimaad kale oo aad jadwal u samayso baaritaanka COVID.
Kuwa kale ee guriga ku nool waa inay gurigooda ka joogaan dugsiga ama daryeelka carruurta, sidoo kale.
Carruurtu waa inay guriga u joogaan cudurrada kale ee leh calaamado la mid ah COVID-19, sida dhuun xanuun, calool xanuun, ama indho casaan ah.
Xafiisyada caafimaadka dugsiga
Qoysasku waa inay la tashadaan dhakhtarkooda ama ururada caafimaadka ee maxalliga ah, degmada ama gobolka si ay wax badan uga ogaadaan baaritaanka COVID-19. Waxa kale oo aad booqan kartaa websaydhka MDE si aad u Raadiso Goob Tijaabad ah .
Yey Tahay In Isbaro?
Qoysasku waa inay la tashadaan dhakhaatiirtooda ama ururada caafimaadka ee maxalliga ah, degmada, iyo gobolka si ay wax badan uga bartaan tallaallada oo ay u go'aamiyaan waxa, haddii ay jiraan wax, ugu fiican qoyskooda. Waxaad wax dheeraad ah ka baran kartaa bogga tallaalka MDH.
Raadinta COVID Wadajir
Waxaan halkaan u nimid inaan caawino ilmahaaga iyo qoyskaaga sanadka oo dhan!
La halganka tikniyoolajiyadda
Dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda?
Adiga ama cunuggaaga ma jirran tihiin?
Hel cuntadaada bilaashka ah!
Faallooyin ku saabsan Qorsheheena Barashada Nabdoon? U SOO DIR COMMENTS@STILLWATERSCHOOLS.ORG